I-Postano 2.5: Yongeza ubuGcisa kunye nokwenza ubuGcisa kwiiNdawo zokuBoniswa kweNtlalontle | Martech Zone
IPostano 2.5: Yongeza ubuGcisa kunye nokuziThengisa kwiiNtlalontle zoBoniso lweNtlalontle
NgoMvulo, Julayi 21, 2014 NgoMvulo, Julayi 21, 2014 Douglas Karr
Sibhale malunga nokumangalisa amaziko emiyalelo yemidiya yoluntu kunye nemiboniso ye-arena ixhaswe nguPostano, umxhasi wale ndawo. Iposi liqonga esilisebenzisayo ukukhusela ibha yethu yonyawo ebonisa izithuba zokukhankanywa kwabaxhasi bethu kwimidiya yoluntu. UPostano uqhubekile nokukhulisa ifayile yakhe Iminikelo yokuthengisa ebonakalayo kukhululo lwabo olutsha, ngokukhawuleza iba liqonga eliphambili lokubonisa Umxholo oveliswe ngumsebenzisi ezemidlalo, ezemfashini, iimveliso zeemveliso zabathengi, ukonwatyiswa, ukhenketho, kunye nentengiso kunye neearhente zemisitho ethe nkqo.
Amakhosi e-LA asebenzise ukubonwa kwefoto kaMoses, eyenziwe ziifoto zabalandeli ezithegiwe #WeAreAllKings, kwikhasi labo lasekhaya emva kokuphumelela iNdebe yeStanley.
Inguqulelo yePostano 2.5 yokukhutshwa kubandakanya iindlela eziphambili zokucoca kuluntu, isiHlomelo seSitayile sokubonisa ngokwesiko, ukubonwa kwedatha okuguqukayo kunye nolunye uphuculo lwemveliso. Ngokudibeneyo ezi zongezo zenza iqonga elinamandla eliphambili leemveliso ukuze zifumane abalandeli, kwaye zikhawuleze zikhawuleze kwaye zipapashe owona mxholo wabalandeli konke okuvela kwideshibhodi enye.
Ukudibanisa umxholo wentlalontle ukusuka kumaphulo ukuya kwiindawo ezinje ngeminyhadala, iivenkile zentengiso, amabala emidlalo, kunye neendawo zokuphembelela ziguqula indlela ii-brand ezibaqonda ngayo abalandeli babo abakhulu kunye nokwenza ukuba abathengi babo basebenze. Ngale nto ikhutshiweyo, sinike abathengi bethu izixhobo ezinamandla kakhulu zokunceda ukuba basebenzise ubuchule babo. Abathengi bethu bajonge ukuthatha umboniso wentlalontle kwinqanaba elilandelayo, kwaye ngezi zinto ziphambili, banokwenza ngobuchule nangokucinga, kwaye bavelise amava oluntu. UJustin Garrity, uSVP, uPostano
Uhlobo lomhleli -Iseti yezixhobo ezikusikrini, ezivumela iimveliso ukuba zenze ukubonwa ngokwasentlalweni ngesakhono sokuguqula iifonti, imibala, kwaye ukhethe kwiseti yeetemplate ezinomtsalane. Umhleli weSitayile ubandakanya umhleli weCSS ukunika abayili bewebhu ulawulo olungazange lubekho ngaphambili kwimbonakalo kunye nokuziva kokubona kwabo. Umhleli weSitayile ukwabandakanya ukukwazi ukongeza imifanekiso kunye nokufaka umxholo wokuxhasa njengemibono yangaphakathi kumboniso.
Imijelo eSmart -Nika ulawulo lokucoca ulwelo lokubandakanya nokungabandakanyi ukukhankanywa, ii-hashtag, kunye namanye amagama aphambili. Imijelo ye-Smart ivumela ii-brand ukuba zilungelelanise umxholo wazo ngendlela efanelekileyo yokuphucula inkqubo ye-curation kunye nokukhethwa kwe-UGC. Ezi zixhobo zePostano Platform zinceda iimveliso zibonise iimpawu zazo ezizodwa kubaphulaphuli abaphambili, kwaye zenze ukubaliswa kwelo bali ngokubona ngokulula kwezentlalo.
Ukuboniswa kwedatha entsha enamandla -Umboniso omtsha we-mosaic visualization (eboniswe ngezantsi), i-caching browser yendawo ukuthintela ukunqamka kwe-intanethi ekuchaphazeleni imiboniso, ukubanakho kokujonga umbutho ngokulula kunye nokuphuculwa kwesantya.
Isinxibelelanisi seMifula eSmart ivumela ii-brand ukuba zenze imisinga eyenzelwe umxholo womtsalane ohluziweyo kwiimfuno zabo zephulo loluntu.
Umhleli weSitayile unika iimveliso ulawulo olupheleleyo lokwenza kunye nokwenza ngokwezifiso ukubonwa kwentlalo komboniso.
Iposi lixesha lokwenyani, iqonga lokuthengisa elibonakalayo elifumana kwaye ligcine owona mxholo ubalaseleyo wabalandeli kwaye lipapashe loo mxholo njengomboniso omangalisayo kuyo yonke iwebhu, iselfowuni kunye nokuboniswa kwescreen esibonakalayo kumashishini anjengemidlalo, ukuthengisa, iminyhadala nangaphaya. UPostano ubambisene neempawu eziphambili ukwenza iqonga leemveliso kunye nabalandeli ukuba babalise amabali abo kunye. Abathengi bePostano baquka i-BCBG, i-CFDA, i-Evernote, iGoogle, ii-Kings, i-Oregon Ducks, i-YOOX kunye nabanye abaninzi.
tags: ukukhangela i-hashtagipostiumbono wentlaloUmxholo oveliswe ngumsebenzisiuboniso olubonakalayo
Yonke into abaThengisi kufuneka bayazi malunga neZaphulelo kunye namaQhinga amaKhuphoni
Jul 21, 2014 ngo-8: 33 AM
Ngaba le yinto yeebhlog zemihla ngemihla ezinje ngam? Iyandikhumbuza kancinci ngeRebelmouse.
Jul 21, 2014 ngo-2: 04 PM
Akunakulindeleka ukuba uGavin -Postano agxile kwiinkampani ezinezinto ezibonakalayo, njengeendawo zentengiso, iinkampani, iminyhadala kunye neenkomfa, kunye neenkundla zemidlalo!